अनुहारमा देखा पर्ने सम्स्याबाटै पत्ता लाग्छन् यी १० राेगहरू - ज्ञानविज्ञान
अधिकांश रोगहरु कुनै न कुनै संकेतबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तै केहि स्वास्थ्य समस्या छन्, जुन अनुहारबाटै थाहा पाउन सकिन्छ ।
१. यदि तपाइको अनुहारमा मौनता छाएको छ भने थाहा पाउनुस् कि किड्नीमा कुनै न कुनै समस्या छ । यस्तो समस्या औषधिको साइड इफेक्टको कारण पनि हुन सक्छ ।
२. महिलाको माथिल्लो ओठ तथा हड्डीमा रौ उम्रिनु भनेको थाइराइड ग्रन्थीमा तलमाथी भएको संकेत हुन सक्छ ।
३. लामोसमय सम्म अनुहारमा पहेलोपन देखिनु कलेजोको रोगको संकेत हो । साथै यो एनिमियाको संकेत समेत हुन सक्छ ।
४. क्याल्सियमको अभावमा अनुहारमा सेतो दाग देखा पर्दछन् । साथै सेतो दाग देखा पर्नु आइरनको कमी अथवा पेटमा जुका परेको संकेत पनि हुन सक्छ ।
५. पुरुषको दाह्रिको रौ झर्नु हाइपोथाइर्वाईडिज्म र एनेमियाको संकेत हो ।
६. अनुहारमा चमकदार सेतो दाग देखा पर्नु कुष्ठरोगको संकेत हो । यो एकदमै गम्भिर समस्या भएकोले संकेत देखा पर्नासाथ सम्बन्धित डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।
७. अनुहारमा खटिरा देखा पर्नु चिकेनफक्सको संकेत हो । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई खोकी लाग्ने समस्या समेत हुन सक्छ ।
८. अनुहारमा लामो समयसम्म डन्डिफोर देखा पर्नु हर्मोनल इम्व्यालेन्सको संकेत हो । पेटसम्बन्धि रोगको कारण पनि अनुहारमा डन्डिफोर देखा पर्दछ ।
९. लगातार कैयौ दिनसम्म अनुहारमा चिलाउने समस्या भएमा एन्जियोएडिमा अर्थात अनुहार सुन्निने संकेत हुन सक्छ ।
१०. अनुहारमा हल्का दाद देखा पर्नु भनेको पेटमा विभिन्न ब्याक्टेरिया भएको संकेत हो ।
कुन राेग लाग्याे ? अनुहारबाट थाहा पाउनुहाेस
रोगको कुनै न कुनै संकेत अवश्य हुन्छन् । निकै ध्यान दिएर हेर्ने हो वा याद गर्ने हो भने शरिरमा कस्तो रोग लागेको छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ मात्र कस्तो रोग लाग्दा कस्तो संकेत हुन्छन् भन्ने बारे सचेत हुन आवश्यक छ । आज हामी तपाईं यसबारे ८ जानकारी दिँदै छौं ।
मृगौलाको समस्यायदि अनुहार पूरै सुन्निन्छ भने यो मृगौला रोगको संकेत हो । यो समस्या औषधीको साइडइफेक्टका कारण पनि हुनसक्छ ।
हाइपोथायराइडिजम्ःपुरुषको दाह्रीको झर्न थाले हाइपोथाइराइडिजम्को संकेत हुनुक्छ । यो समस्या एनिमियाका कारण पनि हुनसक्छ ।
थाइराइडमहिलाको ओठ माथि र चिउँडोमा रौं आउन थाले यो थाइराइड वा हर्मोनमा असुन्तुलनको संकेत हुनसक्छ ।
कलेजोको रोगलामो समयसम्म अनुहार पहेंलो भए कलेजोको समस्याको संकेत हुनसक्छ । साथै यो जन्डिस वा रक्तअल्पत्ताको संकेत पनि हुनसक्छ ।
अनुहारमा सेतो दागः
क्याल्सियमको कमीअनुहारमा सेतो दाग हुनु क्याल्सियमको कमीको संकेत हुनसक्छ । साथै, यो आइरनको कमी वा पेटको किरा भएको संकेत पनि हुनसक्छ ।
स्पष्ट रुपमा देखिने चम्किलो सेतो दागः
कुष्ठ रोगअनुहारमा चम्किलो सेतो दाग हुनु कुष्ठरोगको संकेत हुनसक्छ । यो समस्या निकै गम्भीर हुने गर्दछ । त्यसकारण तुरुन्त डाक्टरलाई भेट्न आवश्यक छ ।
ठेउलाअनुहारमा पानी फोका आउनु ठेउलाको संकेत हुनसक्छ । यसमा व्यक्तिलाई ज्वरो पनि आउन थाल्छ ।
अनुहारमा लामो समयसम्म डण्डिफोरको समस्या हुनु हर्मोनको असन्तुलनको संकेत हुनसक्छ । पेट सम्बन्धि रोगका कारण पनि यो समस्या निम्तिन सक्छ ।
लगातार थुप्रै दिनसम्म अनुहार सुन्निरहनु एन्जियोएडिमाको संकेत हुनसक्छ ।अनुहारमा हल्का दागःपेटमा किरायदि अनुहारमा हल्का सेतो दाग देखिए यो पेटमा किरा भएको संकेत हुनसक्छ ।
अनुहार हेरेरै थाह पाउन सकिन्छ शरीरमा लागेकाे राेग!
अनुहार मानिसको व्यक्तित्वका साथै स्वास्थ्यको पनि ऐना हो । मानिस स्वस्थ भएको-नभएको कुरा अनुहारबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
सुक्खा ओठ र छाला शरीर डिहाइड्रेट हुनुको संकेत हो । हरेक मौसममा ओठ सुक्खा हुने व्यक्तिले मधुमेह रोगबारे जाँच गराए ठीक हुन्छ ।
कतिपय महिलाका चिउँडो र ओठमाथि बाक्ला रौँ हुने गर्छन् । शरीरमा हर्मोनको सन्तुलन बिग्रिएकाले यसो भएको हुन सक्छ ।
अनुहारको छाला पहेँलो देखिएमा शरीरमा रगतको कमी भएकाले हुन सक्छ ।
४.व्यायामको कमी , अस्वस्थ आहार विहार , उच्च रक्तचाप , रगतमा बढि कोलेस्टेरोल हुनु पनि मधुमेहका कारक हुन्।
मधुमेहका रोगीमा मृगौलाको रोग हुने सम्भावना पनि अत्यधिक रहेको हुन्छ । मधुमेहका कारण मुटुका विभिन्न रोग देखिने समस्या धेरै रहेको हुन्छ । करीब५० प्रतिशत मधुमेहका रोगी मुटु तथा नशा सम्बन्धी रोगका कारण मर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
६. सन्तुलित र नियमित भोजन लिने र नियमित व्यायाम गर्ने
Don't Miss it मदर टेरेसाको केहि जीवन उपयोगी भनाइहरु
Up Next यो पढ्नुहोस् अनि तपाईको भान्छामा मरिच छुट्दैन